Puntland oo wali ku Adkaysanaysa in laga Gudbo Nidaamka 4.5-ka – Radio Daljir
Puntland oo wali ku Adkaysanaysa in laga Gudbo Nidaamka 4.5-ka
Diseembar 13, 2015 1:27 b 0
Somalia, December 13, 2015-(Daljir)_Shir u dhaxeeya madaxda mamuladda dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saaka mar kale uga furmaya xarunta xalane ee magalada Muqdisho.
Shirkaasi ayaa ku tilmaamsan in lagu soo saaro go’aan la isku raacsan yahay oo ku aadan doorashada 2016 iyo nidaamka lagu salaynayo.
Waxaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn loo hadal hayay nidaamka 4.5 in doorashadaasi lagu dabaqayo halka madaxda mamuladda Puntland iyo Jubbaland diidsan yihiin nidaamkaasi oo ay qabaan inay tahay in laga dhigo hab-deegaan, balse ilaa iyo hadda war cad kama soo bixin.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in la iska qaatay 4.5 laguna shaacin doono kulanka maanta walow shacabka Puntland iyo siyaasiyiintooda ka war sugayaan go’aamada soo bixi kara.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Puntland oo saxaafada la hadlayna waxay ka digeen in Puntland aysan qaadan go’aanka ah nidaamka 4.5 in lagu saleeyo doorashada haddiiba ay dhacdana talada dib loogu soo celiyo Baarlamaanka iyo shacabka.
Booliska Netherland oo Xiray Gabar Soomaali ah
DHAGAYSO:Barnaamijkii Saaka iyo Dunida_Axad_13
on Midowga Yurub oo diiday Muddo kordhinta baarlamaanka kuna hanjabay tilaabo dheeri ahEU du ma ogola mana aaminsana wax extension la yidhaahdo waayo iyaguba kuma dhaqmaan extension....